Maxay tahay sababta ay Dowladda Shiinaha xiddigaheeda kubadda cagta uga mamnuucday inay Shaabad ku xardhaan jirkooda? – Gool FM
Maxay tahay sababta ay Dowladda Shiinaha xiddigaheeda kubadda cagta uga mamnuucday inay Shaabad ku xardhaan jirkooda?
Ahmed Nur January 1, 2022
(Beijing) 01 Jan 2022. Dowladda Shiinaha ayaa xiddigaheeda xulka qaranka kubadda cagta ka mamnuucday inay jirkooda ku xardhaan Shaabad ama tattoo, waxaana ay fartay in xiddigaha haatan leh inay masaxaan ama ay qariyaan si ay tusaale wanaagsan ugu noqdaan bulshada.
Shaabadda ayaa faldambiyeed looga arkaa dalka Shiinaha, waxaana ay Dowladdu ka soo horjeestay xiddigaha jirkooda ku midabeeya, taasina war wanaagsan uma ahan daafaca Zhang Linpeng, kaasoo jirkiisa oo dhan ku wada xardhay Tattoo.
Si kastaba ha noqotee, isagoo kaliya ma’ahan xiddigaha xulka Shiinaha ee Shaabadeysan, waxaana kula jira daafaca kale ee Shi Ke oo qoorta shaabad ku leh.
Sida la wada og yahay, shaabadu saameyn kuma lahan awoodda iyo bandhigga ciyaartoyda, waxaana tusaale kuugu filan Lionel Messi oo jirkiisa inta badan Tattoo ku midabeeyey iyo halyeyga qaranka England ee David Beckham oo khad u marsan tahay, inkastoo Cristiano Ronaldo uusan jirkiisa Shabadeyn, maxaa yeelay Weeraryahana Manchester United ayaa si joogta ah u bixiya dhiiggiisa.
Yeelkeede, muhiimadda ugu weyn ee dowladda Shiinuhu ka leedahay in xiddigaheeda qaranka kubadda cagta aysan jirkooda ku xardhin Tattoo-ga ayaa ah in tusaale wanaagsan bulshada u noqdaan, sidoo kalena ay dambi ka tahay dalkaasi in Shaabad la marsado, balse u jeedkeedu ma’ahan in dhiig iyo dhuux la bixiyo.
Muddada uu garoommada ka maqnaan doono Reece James oo la shaaciyay
Taariikhaha waa weyn ee kubadda cagta sanadka cusub ee 2022… (AFCON, Final-ka Champions League, Koobka Adduunka, El Clasico & kuwo kale)